Archive du 20200303
Hery sy Voahangy Tsy nisaraka izany !
Nanaovana resabe hatramin’izay ny fiainana manokan’ny filoham-pirenena teo aloha Hery Rajaonarimampianina sy ny ankohonany.
Jean Ravelonarivo Saika hivadika ho mpanohitra ?
Anisan’ireo tompon’andraiki-panjakana teo aloha nampanantsoina teny amin’ny birao misahana ny ady amin’ny kolikoly na PAC ny praiminisitra teo aloha,
Tiako I Madagasikara Mitaky ny fanafoanana ny fifidianana rehetra
Manaraka akaiky ny fivoaran’ny raharaham-pirenena ny antoko Tiako I Madagasikara ka nanatanteraka fivoriana maika omaly.
Afera kara-panondro sy lisi-pifidianana Niezaka niaro tena mafy ny CENI
Somary tsy ampy angamba ny fanazavana. Ny tanjona dia hanentana ny olona hanamarina sao tafiditra ao anatin’izay.
Rina Randriamasinoro “Tena nohitsakitsahina ny zon’ny vahoaka”
Naneho ny heviny momba ny raharaham-pifidianana taorian’ny raharaha kara-panondro sy lisi-pifidianana miverin-droa an-tapitrisany
Antoko PSD Miantso ny HCC hanafoana ny fifidianana
Tsy azo odian-tsy hita ny fahadisoana goavana tamin’ny fiverimberenan’ny laharana kara-panondro, araka ny tatitra nataon’ny
Mponin’Anosimahavelona “Tsy homenay ny Sinoa ny tanindrazanay”
Tamin’ny faha Mpanjaka ity no tanànanay, efa an-jatony taona ny raiamandreninay no teto,…
Atletisma Malagasy Tohin’ny fandaharam-potoana manaraka
Araka ny tatitra navoakan’ny FMA « Federation Malagasy d’Athletisme »
Fandraharahana sy toekarena Tena ilaina ny fampiofanana arak’asa tsara kalitao
Fototra ijoroan’ny fampandrosoana ny fampiofanana arak’asa hoy ny Tale Jeneralin’ny Fampiofanana arak’Asa, Jean Luc Ramamonjiarisoa nandritra ny famelabelarana mahakasika ny Tahiry Famatsiam-bola ho Fampiofanana ny mpiasa (FMFP).
Jono sy harena an-dranomasina Hiara-kiasa i Madagasikara sy ny vondrona Eoropeanina
Nihaona sy nidinika tamin’ny praiminisitra lehiben’ny governemanta Ntsay Christian sy ny Ambasadaoron’ny Vondrona Eoropeanina eto amintsika,
Mpandraharaha vahiny eto Madagasikara Manjakazaka mampitaraina ny Malagasy
Mitombo be ankehitriny ny tsena malalaka sy mahakasika ny asa sy ny tetikasa fanamboarana trano eto Madagasikara.
Tranga hafahafa Tovovavy niboridana tratra tao anaty valan’omby
Tranga hafahafa indray no niseho tao Vinaninkarena, distrikan’Antsirabe faharoa ny alin’ny alahady lasa teo.
Ankizy ratsy naoty tsy avela hanao fanadinana Hosazian’ny minisitera ireo sekoly tratra
Niteraka resabe teto amintsika mihitsy ka nanosika ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena handray andraikitra, indrindra fa ho an’ireo sekoly
Làlana vao vita eto Antananarivo Ratsy kalitao, feno lavaka sahady
Tsy ampy herintaona akory dia manomboka simba sahady ireo làlana eto an-drenivohitra. Manomboka misy lavaka, ary miitatra haingana dia haingana ny habeny noho ny rano sy ny antony hafa.
AMPAHIBE Nahazo fitaovana ny borigady miady amin’ny fakana an-keriny
Tontosa omaly alatsinainy 3 martsa maraina teny Ampahibe ny fanolorana fitaovana (môtô 10, zodiac 01 sy vedette rapide 02)